“Shirweynihii ururka SOMHSO oo London lagu qabtay iyo baaq ku saabsan xaaladda cuduradda dhimirka Somaliland oo ergooyinkii shirku soo saareen” |
London-Bishan April 1-deedii waxa ka dhacey shirweyn oo lagag ahadlayey xaaladda dadka qaba xanuunadda dhimirka ee ku nool Somaliland.
Shirkan oo uu soo qaban qaabiyey Ururka Somaliland Mental Health Support Organizationoo ka hawl gala Somaliland iyo dalka UK, waxaa ka soo qaybgalay ergooyin badan oo ka kala yimid goboladda uu ka kooban yahay dalka UK. Shirka waxa furey oo soo dhaweeyey wufuudda guddoomiyaha guud ee ururka Naasir Ciise Geeljire. Sidaasoo kale waxaa ka sooqayb galay wakiilka Somaliland ee dalka UK marwo Ayaan Maxamuud Cashuur, Culimo ay ka mid yihiin Sh. Maxamuud Axmed Dalmar, Sh.C/qaadir Cali Cambe, dhakhaatiir iyo aqoonyahanno, iyo madaxda jaaliyadda Somaliland ee dalka UK.
Kulankan oo laga soo jeediyey warbixinno iyo cilmibaadhisyo ku saabsan xaaladda dadka dhimirkaqaba ee Somaliland, waxqabadkii ururka ee sanadihii tagay iyo qorshaha labadda sano ee soosocota,
ayaa gabgabaddii shirka ergooyinkii shirku ka soo saareen baaq ku saabsan xoojinta daryeelka iyo taageeridda dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool Somaliland.
Shirweynuhu waxa uu ugu baaqay xukuumadda Somaliland in dib u eegis lagu sameeyo siyaasadda caafimaadka Somaliland isla markaana mudnaanta la siiyo daryeelka iyo daweynta dadka qaba xanuunadda dhimirka, lana soo saaro xeerarka lagamamaarmaanka u ah daryeelkadadkaasi.
Baaqashirkalagasoosaarayqodobaddaugumuhiimsanwaxaa ka mid ah:
1.In xukumadda cusub ee Somaliland ay ahmiyad weyn siiso sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha gaarka ah ee horyaalla dadka la nool xanuunadda dhimirka.
2.In miisaaniyadda dawladda lagu daro sannad kasta qoondo lacageed oo lagu dhisaayo, kabaayo, horumarinaayo goobaha lagu xanaaneeyo dadka la nool xanuunnada dhimirka.
3.In wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ay muhiimad gaara siiso wax ka qabashada baahiyahaasi ay qabaan dadkaasi iyo in dib u eegisiyo dib u habbeynba lagu sameeyo siyaasadda caafimaadka dhimirka ee Jamhuuriyadda Somaliland ee heer qaran, isla markaana la soo saaro shuruucda kale ee muhiimka u ah daryeelka dadka la nool xanuunadda dhimirka.
4.In qeybaha bulshada sida ganacsatada, culima-awdiinka, iyo ururrada bulshada reer Somaliland ee waddankii joogaa ay taageeraan hawalaha ururka SOMHSO ee ka socda goboladda iyo degmooyinka Somaliland.
5.In dhammaan ururrada jaaliyaddaha Somaliland ee ku kala nool Yurub, Markeykanka, Khaliijka iyo Ustareeliya ay taageeraan hawlaha ururka ee ah daryeelka iyo daweynta dadka qaba xanuunadda dhimirka.